जनयुद्धका दमनकारी एसएसपी बढुवाकाे प्रारम्भिक सूचीमा, काे काे परे ? | mulkhabar.com
जनयुद्धका दमनकारी एसएसपी बढुवाकाे प्रारम्भिक सूचीमा, काे काे परे ?
May 8, 2018 | 9:57 am 587 Hits
माअाेवादी अास्था राखेकाे अाराेपमा सर्वसाधारणलाई पक्राउ गरि अमानविय यातना दिने तथा हत्या सम्म गर्न भुमीका खेल्ने प्रहरी एसएसपीहरूलाई बढुवाकाे सिफारिस भएपछि विराेध भएकाे छ ।
बढुवा समितिकाे साेमबार बसेकाे बैठकले १६ जना एसएसपीलालाई डिआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रहरी नियमावली २०७१ काे नियम २७ काे उपनियम (४)काे प्रावधानअनुसार जनपद प्रहरीतर्फ बढुवा सिफारिस भएकाे जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
अधिकारीले लमजुङमा रहँदा शिक्षकहरू बासुदेव शर्मा , रामप्रसाद पाैडेल, रामप्रसाद सुवेदी सहितका सर्वसाधारणलाई अमानविय यातना दिएका थिए । यातनाकै कारण शर्माकाे निधन भएकाे थियाे । त्यसैगरी दयासागर घिमिरे, तेजबहादुर भण्डारीलाई पनि उनैले पक्राउ गरी यतना दिएका थिए । भण्डारी हालसम्म बेपत्ता बनायएका उनका छोरा रामकुमार भण्डारीले बताए ।
जेलमा समेत गएर मरणासन्न हुने गरी यातना दिने गर्दथे । उनका विरुद्ध पीडित सबैले सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगमा किटानी जाहेरी सहितको निवेदन दिइसकेका पीडतहरुले बताएका छन् ।